भारतीय विदेश सचिव जयशंकरले प्रम कोइराला, प्रचण्ड केपीलाई भेट्ने जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
भारतीय विदेश सचिव जयशंकरले प्रम कोइराला, प्रचण्ड केपीलाई भेट्ने
जनबोली १९ चैत, काठमाडौ । नेपालको दुई दिने भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकरले राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ । उनले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भ्रमणकै पहिलो दिन विहीबार दिउँसो तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार बिहान भेट्दैछन् ।
बिहीबार बिहान नेपाल आउने जयशंकरले विहान ११ बजे नेपाली समकक्षी शंकरदास बैरागीसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेट गर्नेछन् । पाण्डेसँगको भेटपछि जयशंकरले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग पनि संविधान निर्माणका बारमा छलफल गर्नेछन् ।
भारतीय विदेश सचिव जयशंकरले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय हितका बारेमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।
भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सहुलियत ऋण तथा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । हुलाकी राजमार्गको अघि बढ्न नसकेको कामका विषयमा पनि छलफल गर्न जयशंकर नेपाल आएको बताइएको छ ।
गत अगष्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणको क्रममा एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेका थिए ।
यस्तै, गत साउनको विदेशमन्त्रीस्तरीय वैठकमा नेपाल-भारतबीच पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने सहमति भए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउने बारेमा पनि भारतीय विदेश सचिव जयशंकरले छलफल गर्ने परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ ।
इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रसंघको महासभामा यस्तो नयाँ रेकर्ड